Ixesha elizayo liya kubandakanya iMicrosoft | Martech Zone
Ixesha elizayo liya kubandakanya iMicrosoft
Lwesine, Okthobha 20, 2011 Lwesine, Okthobha 20, 2011 Douglas Karr
Andiyikhankanyi iMicrosoft ngokwaneleyo Martech Zone. Ngokwenene ayinakuxolelwa kuba inkampani sele inendawo enkulu yokunyathela. Ukuthetha ne-COO yeLiquidSpace, UDoug Marinaro, kwaye kwiveki ephelileyo bendithetha no UJosh WaldoIMicrosoft yenza amanyathelo amangalisayo ngokubeka isiseko kunye nomnini weShishini elincinci. Olu tyalo-mali kwangoko kubomi beenkampani lolunye oluza kuhlawula imali enkulu kwiMicrosoft kwixa elizayo.
UJosh Waldo wayeyi-SMB (Amashishini amaNcinci naPhakathi) uMthengi kunye neSisombululo kuMlawuli weNtengiso yeQabane (Ngoku unguMlawuli oPhezulu weeMarike ezitsha kunye namaZiko aSakhulayo eMicrosoft). UJosh wabelane namanye amanani nam ayothusayo… Inkcitho kaMicrosoft ye- $ 9.5 Billion (nge-B) kuphando kunye nophuhliso ngoku. Okothusayo nangakumbi kukuba i-70 ukuya kwi-90% yohlahlo-lwabiwo mali iya kugxila kwilifu! Wowu.
Omnye umzekelo wendlela iMicrosoft esebenza ngayo nee-SMB yi IBizSpark.
Ukunceda ukuqala kwamanqanaba okuphumelela kwetekhnoloji ukuba iphumelele ngesoftware kaMicrosoft, iBizSpark yenza ukuba ukufikelela kuluntu lwamaqabane kwihlabathi liphela- bonke ababandakanyekayo ekuxhaseni ubuchwephesha obukhuthaza isoftware kunye nesizukulwana esilandelayo soosomashishini betekhnoloji.
Ezinye zeenkampani zamaqabane ziyamangalisa:
Xero accounting, amatyala kunye software zebhanki
Umhlwa -Indawo yokwenza iprofayili yokuqalisa kunye nokunxibelelana nabatyali mali abangama-35,000.
Imopapp -Isicelo sokulandela umkhondo wentengiso kuzo zonke iimarike ezihambayo.
UmthethoPivot -Isixhobo esisemthethweni sokufumana amashishini.
Ideski -Isiza sokudibanisa nezixhobo zabasebenzi ezikude kuyo nayiphi na into ukusuka kuphuhliso ukuya kwinkonzo yabathengi.
Ungayichazanga imibutho enceda imbewu, inkxaso kunye nokwazisa iinkampani zokuqalisa. Kanye apha e-Indianapolis siyibonile impumelelo yenye yezi - Impelaveki yokuqalisa.
IBizspark ayisiyo nje ukudibanisa amashishini nemali, iimveliso okanye amaqabane, ikwasebenza ukunceda ezi nkampani ngoqeqesho lwazo kunye neemfuno zentengiso ngokunjalo. Sayina ungene kwaye uyakufumana uluhlu olumangalisayo lweziganeko kunye nezixhobo kwindawo yakho ukukunceda ngokusungula ishishini eliyimpumelelo. IBizspark ikwadibanisa abafundi kwishishini. Cinga ngalonto… ukusuka kumfundi ukuya kumashishini amancinci, iMicrosoft inika amashishini lonke uncedo abaludingayo. Esi sisicwangciso esiliqili!
Elinye lala mashishini lalikhona Indawo yoTywala, usetyenziso olumnandi olwakhiwe kwifayile ye- Iqonga leWindows Azure. I-LiquidSpace yindawo yesibini kunye nesicelo esiphathwayo apho abasebenzi abahambahambayo banokufumana indawo yokusebenza kuyo, nokuba isimahla, iyafumaneka iiyure ezimbalwa, usuku okanye nangaphezulu. Isicelo seselfowuni senziwe sasebenza kwindawo, ukuze ubhabhe ungene esixekweni kwaye uphume kwindawo ekhoyo ngaphandle kwexesha.
Iinkampani kunye nabanini bepropathi yorhwebo abanegumbi banokufaka ukubakho kwabo kwiLiquidSpace. Kusimahla ukuba indawo isimahla. Ukuba isithuba sibiza imali, iLiquidSpace ifumana ipesenti yengeniso. Ukuthetha nomsunguli we-LiquidSpace kunye ne-COO Doug Marinaro, bajoyina iBizSpark kwaye bakhawuleza bamkela iqonga leAzure. Kwiiveki ezi-6 zenkxaso-mali, iLiquidSpace yayiyi-beta. UDoug uthe indleko ngaphantsi komrhumo wakhe weselfowuni.
I-LiquidSpace ngoku ineendawo ezingaphezulu kwama-200 ezibhalisiweyo, ubukhulu becala eCarlifonia. Inkampani ngoku inabasebenzi abangama-20 abasebenza kude phakathi kweMinneapolis ukuya eMinsk kunye nekomkhulu ePalo Alto. UDoug uthe eyona nto ilungileyo malunga neqonga kunye nokusebenza noMicrosoft kukuba ukwazile ukugxila ekukhuleni kweshishini kunokukhathazeka ngetekhnoloji. Uqinisekile ukuba ukusasazeka kweqonga leAzure kuya kukhula ngokufanelekileyo kunye nenkampani iminyaka.
Okungakumbi kwiPlatform yeMicrosoft Azure:
Ukuba ubanjwe ngasese, ungaphantsi kweminyaka emithathu ubudala, wenza imali engaphantsi kwe- $ 1M yase-US kunye nokuphuhlisa isoftware… unga bhalisa ngoku ukuba lilungu lakho leBizSpark.
Oktobha 23, 2011 ngo-11: 04 PM